Dalal waawayn oo soo dhoweeyey heshiiskii doorashada ee shalay Muqdisho lagu saxiixay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dalal waawayn oo soo dhoweeyey heshiiskii doorashada ee shalay Muqdisho lagu saxiixay
Dalal waawayn oo soo dhoweeyey heshiiskii doorashada ee shalay Muqdisho lagu saxiixay
(Muqdisho) 28 Maajo 2021 – Waxaa shalaytoole Muqdisho lagu saxiixay heshiis dalka u jihaynaya dhanka doorasho ku qabsoonta muddo 2 bilood ah oo lagu soo xulayo Xildhibaannada Labada Aqal ee Baarlamanka iyo Madaxwaynaha dalka.
Dalal waawayn ayaa haddaba soo dhoweeyey heshiiskii shalay la saxiixay oo ay ku tilmaameen mid ”taariikhi ah” oo soo afjaraya cakirnaantii muddada soo taxnayd.
Dalka Maraykanka ayaa sheegay in heshiiskani uu “madaxda Soomaalida ku dhiiri gelinayo inay si dhaqse ah u hirgeliyaan heshiiska.”
Dalka UK ayaa isna soo saaray war kooban oo uu ku sheegayo in “heshiiskani uu dhabbaha u xaarayo in doorasho deg deg ah laga qabto Somalia.”
Turkey oo ah dal Somalia olog la ah ayaa sheegay isna in “ay rajaynayaan in geeddi socodka doorashada si dhaqse ah loo dhamaystiri doono.“
Dalka Sweden oo ah dal 2-aad ee kaalmada ugu badan ku bixiya mashaariicda Somalia oo uu Wasiirkiisa Iskaashiga Caalamiga ah iyo Horumarinta, Olsson Fridh ayaa sheegay in ay ”arrintani muujinayso in ay Somalia xal siyaasadeed gaari karto, isagoo sheegay inay sharaf u tahay inuu shirkaa ka hadlay.”
Previous articleHeshiiskii shalay la saxiixay oo ay ku jiraan qodobbo xasaasi ah oo doorashada ka baxsan (Maxaa ka mid ah?)
Next article”Wax ay Somalia samaysatay ayaan xitaa la’nahay!” – Weriye caan ah oo Ghana ka abuuray dood heer qaran ah (Waa maxay?)